टिकटक अपराधको स्रोत नबनोस् : RajdhaniDaily.com
Homeबिचारटिकटक अपराधको स्रोत नबनोस्
टिकटक अपराधको स्रोत नबनोस्
नवविज्ञानले हाम्रो जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । घरमै बसेर हामी विश्व अवलोकन गर्न सक्ने भैसकेका छौं । विश्वको जुनसुकै क्षेत्रमा पुगेका आफन्तसँग साथै रहेझंै गरी कोठाभित्रै बसेर प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सक्छौं । विश्वमा घटेका सुखान्त दुःखान्त जस्तोसुकै घटनाबारे क्षणमै जानकारी पाउँछौं । वैज्ञानिक उपकरणको प्रयोगले हाम्रो दैनिकी दिन प्रतिदिन सहज बन्दै आएको छ । महिनौं लगाएर हामीले गर्दैआएका कार्य केही दिन भई सम्पन्न गर्ने सामथ्र्य हामीलाई नवविज्ञानले प्रदान गरेको छ । हामीले गर्ने कतिपय कार्य पनि यन्त्रमानवद्वारा नै हुन थालेका छन् । यी सबै उपलब्धि हामीलाई विज्ञानले दिएका उपहार हुन् । एकातिर हाम्रो परिवर्तित जीवनशैली सहज र कष्टरहित बन्दै छ भने अर्कोतर्फ तिनै वैज्ञानिक उपकरण हाम्रै लागि चुनौतीपूर्ण बन्न थालेका छन् । वैज्ञानिक आविष्कार संहारका लागि होइन, विकास निर्माण र मानवीय हितकै लागि हो भन्ने कुरा प्रयोगकर्ता सबैले नबुझेका पनि होइनन्, तथापि हाम्रै कारणबाट वैज्ञानिक उपकरण घातक बन्न थलेका छन् ।
वैज्ञानिक उपलबिध सँगसँगै हामीमा उत्पन्न भएको नकारात्मक सोचमा आधारित उपकरणको दुरुपयोगका बारेमा समाज पनि जानकार छ । वैज्ञानिक उपलब्धिकै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दिनानुदिन बढ्दै आएको नकारात्मक प्रयोगको असर अहिले हाम्रै लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । उपकरणको प्रयोगसँगसँगै नकारात्मक असरबाट बच्न पनि हामीले उत्तिकै सचेत रहनुपर्ने अवस्था छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हामीले प्रयोग गर्दै आएका स्रोत सामग्री प्रयोगकर्ताका निम्ति आफैं हानिकारक हुन सक्दैनन् । प्रयोगकर्ताकै माध्यमबाट उपकरण हानिकारक बन्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्दछ । यस्तै सामग्रीमध्येको टिकटकको सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षबारे यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिन्छ । जसले उपकरणबाटै निम्तिन सक्ने नकारात्मक पक्षको असरलाई न्यूनीकरण गराउन हामीलाई सचेत गराउँछ ।
टिकटकको सकारात्मक पक्ष: टिकटक अहिले सूचना प्रविधिको लोकप्रिय र प्रावकारी साधन बनेको छ । टिकटकले सबै उमेरका व्यक्तिलाई उतिकै प्रभावित बनाउने भए पनि टिनएजर युवायुवती भने यसको प्रयोगबाट अलगिन सक्दैनन् । आधुनिक शिक्षा आर्जनको निम्ति टिकट अत्यावश्यक ज्ञानकै खुराक बनेको छ । नयाँ विषयवस्तुका बारेमा ज्ञान दिने भएकोले विद्यार्थीको निम्ति टिकटक शैक्षिक सामग्रीकै महत्वपूर्ण स्रोत हो । टिकटकको कारात्मक प्रयोग ज्ञानवद्र्धक मानिन्छ तर कुन सामग्री ज्ञानवद्र्धक र जीवनउपयोगी हो, कुन होइन ? भन्ने कुरा सामग्री उत्पादकले मात्र होइन प्रयोगकर्ताले नै छानेर प्रयोग गर्नुपर्दछ । टिनएजर बालबालिकामा छानबिन एवं विश्लेषण क्षमता परिपक्व भइनसकेको अवस्थामा उनीहरू यसको नकारात्मक प्रभावको असरबाट पूर्ण रूपमा अलगिन सक्दैनन् । यसप्रति अभिावाक नै सावधान बन्नुपर्दछ ।
यसैगरी, टिकटक सूचना प्रविधि क्षेत्रको समयसापेक्ष अत्यावश्यक सामग्री नै मनिन्छ । यसबाट प्रसारित हुने ज्ञानवद्र्धक सामग्री विद्यार्थीको निम्ति ऊर्जा र प्रेरणादायक, वयस्कको निम्ति चेतनाको स्रोत र वृद्धवृद्धाको निम्ति मनोरञ्जन एवं मेडिटिएसकै साधन बन्छ । यसले सबै उमेरका व्यक्तिलाई शिथिल हुन दिँदैन, जागरुक बनाइरहन्छ । क्रियाशील बन्ने प्रेरणा जगाउँछ । तर, टिकटकमा प्रसारित सबै सामग्री सबै क्षेत्रका, सबैको निम्ति समान रूपमै उपयोगी नहुन सक्छन् । यसतर्फ भने उत्पादक, प्रयोगकर्ता दुवै पक्षले सावधानी आपनाउन जरुरी छ ।
मर्यादाभित्रको शोभनीय टिकटक सामग्री ज्ञान, मनोरञ्जन र मेडिटिएसनकै साधन मानिन्छ । समाज सुधार, पारस्परिक सद्भाव, विकृति र विसंगति विरुद्धका सामग्री, मन छुने धार्मिक प्रस्तुति, विविध पक्षलाई समेटेर तयार पािरएका ज्ञानवद्र्धक रोचक सामग्री तथा हास्यव्यंग्यमा आधारित सामग्री सबैको निम्ति उतिकै लाभादायक हुन्छन् । त्यस्ता विषयवस्तु सम्बद्ध प्रस्तुति समाजमा पाच्य हुने खालको मर्यादित भए स्वतः लोकप्रिय बन्छ । टिकटक निर्माताले यस्ता आधारभूत कुराप्रति सधैं संवेदनशील बन्नुपर्दछ ।
वैज्ञानिक उपलब्धिकै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दिनानुदिन बढ्दै आएको नकारात्मक प्रयोगको असर अहिले हाम्रै लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै छ
टिकटक निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा विषयवस्तुको छनोट हो । सस्तो लोकप्रियताकै निम्ति भाइरल बन्ने उद्देश्यले मात्र होइन, प्रसारित सामग्री सबैको लागि ज्ञान आर्जनको अनुकरणीय स्रोत बनोस् भन्ने कुरालाई उत्पादनकर्ताले ध्यान पु¥याउने हो भने टिकटकको लोकप्रियता आफैं बढ्छ । टिकटक लोकप्रिय बन्नु भनेको उत्पादक मर्यादित हुनु हो । यसर्थ, जुनसुकै विषयवस्तुको पनि ज्ञानवद्र्धक पाटो हुन्छ तर त्यसलाई प्रस्तुतिको क्रममा महत्व दिएको हुनुपर्दछ । सुसंस्कृत सामाजिक वातावरण, जनजीविका र जीवनस्तर, पेसागत व्यवसाय, मानवीय व्यवहार र आचरण, शान्तिसुरक्षा र अपराध नियन्त्रण आदर्श जीवनशैली तथा पारिवारिक सद्भाव र मायामोहजस्ता जीवनउपयोगी विषयवस्तुको सकारात्मक पक्षलाई समेटेर तयार पारिने टिकटक सदावहार ज्ञानवद्र्धक र महत्वपूर्ण मानिन्छ । यस्ता विषयवस्तुमा आधारित सामग्रीले दर्शकको प्रेरणा जगाउने भएकोले सबैको निम्ति ग्राह्य मानिन्छ । सीमाभित्र रही यस्ता सामग्री प्रसारित गरिए सधैंका लागि लाभदायक एवं सकारात्मक बन्छन् ।
टिकटकको नकारात्मक पक्ष: टिकटक प्रस्तोताको रोल पाँच-सात वर्षकै अवोध बालबालिकालाई प्रदान गर्न अभिभावक नै अग्रसर बन्नेक्रम बढ्दै आएको छ । यस क्रममा कतिपय बालबालिकाबाट हुने प्रस्तुति पनि रोमाञ्चक र आश्चर्यजनक नभएको होइन । त्यो सकारातमक पक्ष हो । तर, पाँच-सात वर्षकै बालबालिकाको प्रस्तुतिमा छानिएको विषयवस्तुलाई भने कतिपय अभिभावकले हलुका ढंगले लिएको देखिन्छ । वयस्क जोडीबीच उत्पन्न हुने पारस्परिक आकर्षण र प्रेमको सन्दर्भ के हो भन्ने कुरा नै नबुझेका अवोध बालबालिकाद्वारा मायाप्रीति, मिलन र विछोड तथा प्रेम वियोगबाट उत्पन्न हुने वितृष्णालाई हाउभाउद्वारा प्रदर्शित गराउनु युक्तिसंगत एवं शोभनीय हो÷होइन ? भन्ने कुरा सर्वप्रथम त अभिभावकले नै बुझ्नुपर्दछ । अवोध बालबालिकाबाट हुने अशोभनीय प्रस्तुति तत्कालका लागि आकार्षण र आश्चर्यकै विषय बने पनि यस्तो प्रस्तुतिबाट बाल मनमस्तिष्कमा भने दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्दछ भन्नेतर्फ अभिभावक सधैं सचेत बन्न जरुरी छ । दबाब एवं बोझपूर्ण बाल प्रस्तुति भविष्यमा कुनै न कुनै रूपमा अपराधकै स्रोत बन्ने कुराप्रति समाज नै सचेत रहनुपर्दछ ।
यसैगरी, टिकटकको अर्को नकारात्मक पक्ष भनेको केवल मनोरञ्जनलाई मात्र ध्यानमा राखी गरिने प्रस्तुति हो । टिकटकमा हुने बाल प्रस्तुतिको अवलोकनकर्ता अन्य बालबालिका नै हुन सक्ने कुरालाई हामीले बिर्सनुहुँदैन । तथापि, यस्तै सामग्री कतिपयको निम्ति रोचक बन्न सक्दैनन् । यसर्थ, टिकटक निर्माताले मनोरञ्जनको साथसाथै ज्ञानवद्र्धक खुराक बन्ने सामग्री छनोट गरेर लोकप्रियता आर्जन गरे त्यो सबैका लागि समान महत्वको हुन्छ ।
टिकटकको अर्को नकारात्मक पक्ष बाल्यावस्थाबाटै बालबालिकालाई अश्लीलतातर्फ उन्मुख गराउने प्रस्तुति प्रदर्शित गराउनु हो । सामान्यतया अश्लीलता भन्नाले अशिष्ट र छाडापन हो भन्ने बुझिन्छ । अश्लील प्रदर्शन कतिपय दर्शककै लागि लज्जास्पद हुन्छ । परिवारका सबै नाता सम्बन्धका व्यक्तिसँगै बसेर हेर्न नसक्ने छाडा प्रवृत्तिको हुन्छ । सर्वांग नांगो हुनु मात्र अश्लीलता होइन । लज्जाबोध हुने सवस्त्र प्रस्तुति, हाउभाउ र शाब्दिक उच्चारण पनि अश्लील हुन सक्छ । अझै कलिला बालबालिकाबाट प्रदर्शित गरिने शाब्दिक एवं हाउभाउपूर्ण अशोभनीय प्रस्तुति पनि लज्जास्पदै बन्छ । यस्तो अश्लील प्रस्तुति बालबालिकाबाट गराउनु राम्रो मानिँदैन । क्षणिक, रोचक र आनन्ददायक मानिए पनि प्रस्तुतकर्ता बालबालिका र समाजकै निम्ति यस्तो अश्लील प्रस्तुतिले दीर्घकालीन विकृति निम्त्याउने कुराप्रति हामीले सधैं सावधानी अपनाउनुपर्दछ ।
समाजमा घट्ने बलात्कार र हत्याका घटनामा बालबालिका नै संलग्न हुनेक्रम पनि दिनानुदिन बढ्दो छ । १४-१५ वर्षकै बालक बलात्कारमाा अग्रसर बन्ने, बलात्कारपछि हत्या गनै नै पछि नपर्ने । १२-१३ वर्षीया बालिका नै गर्भवती बन्ने, समाजमा देखिएका आश्चर्य लाग्दा संवेदनशील अपराध हुन । १२-१३ वषीर्य बालबालिकादेखि ९४ वर्षीय वृद्धसमेत यौनजन्य अपराधमा संलग्न रहेको घटनाले बलात्कार नियन्त्रण बाहिर पुगेको संकेत गर्दछ । बलात्कार र हत्याका घटनामा व्यक्ति कसरी अभिप्रेरित बन्दै आएको छ र त्यसको कारकतत्व पहिचान गरी नियन्त्रण गर्न यस्तै घटनाले राज्यलाई नै चुनौती दिएको देखिन्छ । पछिल्लो पटक स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका चौधका ९४ वर्षीय वृद्ध हीराबहादुर घर्तीले स्थानीय २७ वर्षीया सुस्त मनस्थितिकी युवतीलाई गएको फागुन २१ मा बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भयो । पत्याउनै नसकिने कलिलै उमेरका बालबालिकादेखि शताब्दी नजिककै उमेरमा पुग्दै गरेका वृद्धसम्म यौनजन्य अपराधमा संलग्न रहनेको कारण पनि कुनै न कुनै रूपमा श्रव्य दृश्य सामग्रीको कुप्रभावको परिणाम हो भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । टिकटकबाट प्रदर्शित गराएकै परिणाम बालकद्वारा हुने बलात्कार हो ।
टिकटक र युटुबमा भाइरल बन्नकै लागि सीमाबाहिरको अशोभनीय सामग्री प्रस्तुत गर्नु अपराधलाई प्रश्रय दिनु हो भन्ने कुराप्रति सबै अभिभावकको ध्यान गएको देखिँदैन । भाइरल बनाउने उद्देश्यमा आधारित उत्ताउलो प्रस्तुति उनै प्रस्तोता बालबालिकाकै निम्ति घातक बन्न सक्नेतर्फ न त अभिभावक नै सचेत देखिन्छन् । भाइरल बन्नु आफैंमा नराम्रो होइन, किन कि कलिलो उमेरको आकर्षक प्रस्तुतिले बालबालिकालाई सिद्धहस्त बनाउँछ । समान उमेरका सबै बालबालिकामा यस्तो उत्कृष्ट कला हुँदैन । प्रस्तुतिमा अवस्था अनुसारको वाक् क्षमता, मृदुभाषी र मिठासिलोपन, निर्भीकता, निर्णायक क्षमतामा अभिवृद्धि तथा बालप्रतिभा प्रदर्शित हुन्छ । जसलाई नकारात्मक भन्न मिल्दैन । तर, टिकटकमा भाइरल बन्न शोभनीय विषयवस्तु नै महत्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा बिर्सनुहुँदैन ।
टिकटक प्रस्तुति सोझै अपराधप्रति उन्मुख नभए पनि त्यसबाट अन्य दर्शक बालबालिकाको मनमस्तिष्कमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । प्रस्तुतिको विषय कुनै समस्यामूलक, कुनै उत्तेजनामूलक, कुनै उच्छृंखल एवं अश्लील, कुनै प्रेमवियोग तथा कुनै नैरास्यतामा आधारित हुने भएकाले त्यस्तो प्रस्तुतिले दर्शक बालबालिकालाई नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । टिकटकमा बिछोडको सट्टा मिलन, मर्यादित व्यवहार, माया ममता, पारस्परिक सद्भाव र शिष्टता, बाल शिक्षामा आधारित विषयवस्तुलाई महत्व दिने हो भने त्यो ज्ञान अभिवृद्धिकै साधन बन्न सक्छ । टिकटक निर्माता अभिभावकले यस कुरालाई ध्यान पु¥याउने हो भने टिकटक अपराधको स्रोत बन्न पाउँदैन ।
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा बाटो बिराएकालाई फर्केर आउन आग्रह गरेका छन् । अखिल नेपाल महिला सङ्घ (अनेमसङ्घ) को...
काठमाडाैं । नवनियुक्त स्वास्थ्यराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सपथ लिएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिषरिषद् कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले श्रेष्ठलाई पद तथा गोपनीयताको...
काठमाडाैं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा साउन ३१ देखि भदौ ९ सम्म गर्ने निर्णय गरेको छ । परीक्षा बोर्डको मंगलबार बसेको...
खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र व्यवस्थापन
नेपालको सहमतिबिनै तटबन्ध निर्माण गर्दै भारत
कोरोना संक्रमणले डीएसपी केसीको निधन
प्रेममान डंगोल - July 20, 2021